Shirkadda Airbus oo naqshadeysay nooc cusub oo diyaarad ah - BBC 1593太阳集团城一切网址 Somali
Shirkadda Airbus oo naqshadeysay nooc cusub oo diyaarad ah
Lahaanshaha sawirka Airbus
Image caption Diyaaradda cusub ee ay soo bandhigtay Airbus
Shirkadda sameysa diyaaradaha ee qaaradda Yurub ee Airbus ayaa markii ugu horreysay daaha ka rogtay nooc cusub oo diyaarad ah oo dhowr goor ay tijaabisay.
Diyaaradda ayaa loo nashaqadeeyay si ka duwan muuqaalka diyaaradaha caadiga ee hadda dunida laga isticmaalo, waxayna leedahay baalal dhaadheer oo gadaal u jeeda iyo af hore oo ka duwan ka diyaaradaha kale.
Waxay shirkadda sheegtay in noocan cusub ee diyaarad ay noqon doonta mid rakaab oo dadku ay ku safri doonaan mustaqbalka, ka dib marka la hubiyo, waxaana la sheegay in boqolkiiba 20 ay yareyn doonta isticmaalka shidaalka.
Noocan cusub ee diyaarad ee ay soo saartay shirkadda Airbus waxaa dhowaan lagu soo bandhigay bandhigga diyaaradaha ee Singapore.
Airbus ayaa soo bandhigtay nooc aad u yar oo ah diyaaradda cusub ee ay sameysay.
Shirkadda ayaa la sheegay inay tijaabada arrintan ay sameyneysay tan iyo sannadkii lasoo dhaafay bartamihiisa, waxaana hirgelinta iyo sameynta diyaaradda ay sheegtay ay bilawday sannadkii 2017-kii.
Image caption Gudaha diyaaradda cusub
Dherirka diyaaradda wuxuu gaarayaa 3.2mitir, waxaana shirkadda ay sheegtay in sameynta diyaaraddan ay u adeegstay tiknolojiyad casri ah, si loo hubiyo in ay hawada u geli karto si lamid ah diyaaradaha kale ee caadiga.
Kuraasta gudaha iyo qaabka dadku ay ugu safraan ayaa sidoo kale ka duwan diyaaradaha kale ee caadiga.
Dhawaqa matoorka diyaaradda ayay sidoo kale shirkadda sameysay sheegtay in uu aad uga yar yahay kan diyaardaah kale.
Qoys "jirkooda urayay" oo diyaarad si qasab ah looga dejiyay
Diyaarad taayir la’aan degtay
"Shirkadda Airbus waxay maalgelineysaa sidii looga faa'ideysan lahaa teknoljiyadda casriga ah ee dunida ku soo kordheysa, si ay hormuud ugu noqoto duulimaadyada mustaqbalka," ayuu Jean-Brice Dumont oo ah madaxweyne ku xigeenka shirkadda Airbus kaas oo soo saaray war qoraal ah.
Image caption Kuraasta diyaaraddan cusub ayaa u naqshadeysan si casri ah
Shirkadda ayaa qiratay in naqshadeynta diyaaradan ay ahayd mid ka adag kuwa kale, waxaana Injineerada shirkadda ay sheegeen in marnaba aysan niyada gelinin in mashruucan ay ku guleysan doonaan, marka la fiiriyo diyaaradihii ay horay u sameyeen.
"Markii hore waxaan moodnay in mashruuca hirgelinta diyaaradda uu nqoon doonaa mid aan waxba ka hirgeli doonin oo wuxuu u muuqday mashruuc shirkadda Airbus ay waxbadan ka baran doonta, balse aanan hirgelin," ayuu yiri Adrien Bérard oo hogaaminayay mashruuca lagu hagaajiyay diyaaradda cusub.
Shirkadda ayaa sheegtay in diyaaradda anaay haatan diyaar u ahayn inay rakaab qaado maadaama wali ay ku soocto tijaabo.
Mar uu warbaahinta kula hadlayay bandhigga dalka Singapore, wuxuu madaxa shirkadda sheegay in tiknoljiyadda cusub ay waxbadan u sahashay shirkadaha sameeya diyaaradaha.
Diyaarad rakaab oo duuliye la'aan duushay
Nin qalin ku weeraray rakaab diyaarad
Sannadkii 2007-dii ayey shirkadda Boeing ee dalka Mareykanka sheegtay in sidii loo sameyn lahaa nooc cusub oo diyaaradeed ay la kaashaneyso hey'adda hawada sare ee Mareykanka.
Shirkadda duulimaadyada ee KLM ayaa iyaduna sannadkii la soo dhaafay shaacisay inay maalgelin doonta sidii loo smaeyn lahaa nooc cusub oo diyaarad, taas oo aan shidaal badan u baahan doonin.
Shilalka diyaaradaha iyo dhacdooyinka hawada
Duuliye geeriyooday iyadoo diyaaradii uu waday ay hawada ku jirto
31 Jannaayo 2020
Diyaarad rakaab ah oo ku burburtay Ruushka